January 8, 2019 | Kichuu
Chaltu Takelle was imprisoned by the TPLF regime multiple times, for several years before the regime was forced to release her by the popular movement of #OromoProtests. OPDO imprisoned her again. Gabriele Joshua
WBOn Wallagga keessa socho’u beeyilada nyaatee lafarraa fixaa akka jiru Jeneraal Biraanuu Julaa paarlaamaa Itoophiyaatti himan. Dubbii hoodaa…siyaasa jaarraa 21ffaa… “Waraanni ABO wallagga keessa socho’u gaafa galu, uummanni yaa’ee simate, kabajaan sangaa qalee nyaachise, sangaan [Read More]
BREAKING: SIDAMA IS UNDER ATTACK FROM ALL DIRECTIONS! JANUARY 08, 2019 The enemies of both Oromo and Sidama nation are attacking the Sidama people in the outskirt of Hawassa areas bordering Oromia and Sidama to [Read More]
Ibsa ariifachiisaa Dr. D-Tsiyoon TV Dimtts Haffash irratti LIVE kennaa ture caqaseera. Yaya Beshir Dhimma Raayyaa Ittisa Biyyaa sochii irraa danquu irratti qajeelfama kenne. Waan dubbate keessaa kan armaan gadii qabxii gurguddoo dha: – Hojii [Read More]
Caaltuu Taakkalaa kaleessa bara dheeraaf Wayyaaneedhaan hidhamte. Har’as qabamtee hidhamte oduu jedhu dhagahaa jirra. Haala naannoo sanatti dhalate irraa tarkaanfiin hidhaa deebi’ee babal’achaa jira. Kana keessatti ammoo joolleen keenya kaleessa cubbuudhaan hidhaa keessatti waggootaaf waadamte [Read More]
OMN: Wal irratti duuluuni fi maqaa walballeessuun kuni maddi isaa eessa?? Jawaar dhugaa lafa kaaye jira
“Nuufis hin dhukaasinaa, Nuttiis hin dhukaasinaa” Artist Sayyoo Daandanaa
“Nuufis hin dhukaasinaa, Nuttiis hin dhukaasinaa” Artist Sayyoo Daandanaa Dubbiin kun dubbii gabaabduu ergaan isaa immoo qalamni katabee hin fixu, waraqaan warshaan addunyaaf gad baasaa jiru hundi osoo irratti katabanii hin fuutu. Hadaraa dhaamsa Sayyoo [Read More]
Waraanni Dhokatee Addigiraat irraa Gara Wallaggaatti Godaanaa jiru, harras Walii galtee angaahota waraana Tigiraayiifi Uummata Tigirayiin Karaan itti cufamee dhabbachaa jira. Dargaggoonni Tigraay akka konkolaataaleen waraanaa meeshaa takkallee naannoo sana keessaa fuudhanii hin deemneef waamicha [Read More]
WBON WABII BIYYAA FI SABATI Baga Gammadan Baga Gammanne! Qolaatan Roorroo Diinaa kuman leenji’eera ABO Amaneen Jaalladhee wajjin jiraadha! Onnee tokkitti kaayyoof jiraattuu qaba. Jaallee koo wajjin bara bilisummaa arguuf bara gabrummaa obsaan jira. WBON WABII BIYYAA [Read More]
Choice of Ideologies for Ethiopia: Revolutionary Democracy, Social Democracy, or Liberal Democracy By Assefa A. Lemu, January 8, 2019 Introduction: According to the online Cambridge Dictionary, ideology is “a theory or set of beliefs, especially [Read More]